Madaxweynihii hore ee Mareykanka oo Hambalyo u diray Madaxweynaha la doortay Joe Biden - Awdinle Online
Madaxweynihii hore ee Mareykanka oo Hambalyo u diray Madaxweynaha la doortay Joe Biden
Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa “Hambalyo diiran” u diray Madaxweynaha la doortay Joe Biden, isaga oo ku tilmaamay Dimuqraadiga “nin wanaagsan oo ku guuleystay fursad uu ku hoggaamiyo oo uu ku mideeyo dalkeenna.”
Labada jeer ee Jamhuuriga, war qoraal ah oo ka soo baxay xaruntiisa madaxtooyada ee Dallas, ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyay Donald Trump “waxqabadkiisa siyaasadeed ee aan caadiga ahayn” markii uu ku guuleystay 70 milyan oo cod.
Hadalka Bush ayaa ka dhigay isaga mid ka mid ah jamhuuriyiinta ugu caansan dalka, isagoo qiraya guusha Biden, isagoo ku dhawaaqay Sabtida una hambalyeeyay.
Walaalkiis Jeb Bush – gudoomiyihii hore ee Florida oo isagu naftiisa u hanqal taagay madaxtinimada ilaa Trump uu qabtay magacaabista xisbiga ee 2016 – wuxuu horey Biden ugu diray hambalyo isaga u gaar ah.
“Waan kuu ducayn doonaa adiga iyo guushaada. Hadda waa waqtigii lagu bogsan lahaa nabarrada qoto dheer. Inbadan waxay kaa filayaan inaad wadada hogaamiso, ”
Senetarada Jamhuuriga Mitt Romney ee Utah iyo Lisa Murkowski oo ka tirsan Alaska ayaa iyaguna u hambalyeeyay Biden, halka saraakiil kale oo badan oo Jamhuuriga ka tirsan ay ugu yeereen in la soo hormariyo, iyagoo sheegay in wali aan la tirin dhamaan codadkii oo aan wali la xalin caqabadaha oo dhan.
Madaxweynihii hore Bush wuxuu ogolaaday in Trump uu “xaq u leeyahay inuu raadsado dib u eegis iyo inuu raadsado caqabado xagga sharciga ah.”
Laakiin wuxuu intaas ku daray: “Dadka Mareykanku waxay ku kalsoonaan karaan in doorashadan ay asal ahaan ahayd mid cadaalad ah, daacadnimadeedana la ilaalin doono natiijooyinkeeduna ay caddaan doonaan.”
Bush wuxuu ka dhawaajiyay fariin midnimo ah oo ka dhawaajisay ereyadii Biden, isagoo raaciyay: “Waa inaan u wada nimaadno qoysaskeena iyo deriskeena iyo qarankeena iyo mustaqbalkiisa.
Ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo aan u hogaansamin rabitaanka wadajirka ah ee dadka xorta ah. ”
Previous articleDowlada Kenya oo Damacsan in dhaqaale ka sameyso Soomaalida u dalxiis tagta dalkeeda.
Next articleShacabka Muqdisho Oo digniin loo diray